Shirkan Jaraaid ayaa maanta waxaa magaalada Nairobi ku qabtay
Cabbudhinta Saaxafaddu ku Hayso Gobollada Sanaag iyo Sool ee Soomaaliya
By: Maxamud Axmed Cabdalla
Guuldarradu waa oodhfano, guushuna kun aabbe ayay yeelataa.
Madaxweyne John F. Kenedy
Baadida ninbaa kula daydaya, daalna kaa badane, aan doonihayn inad heshana, daa’im abidkaaye, dadkuna moodi duul wada dhashaan, wax u dahsoonayne.
Muddo hadda 18 sano dhan ayaa waxa dalka iyo dadka soomaaliyeed ku habsaday dagaallo aafeeyey naf iyo maalba. Dalka soomaaliya guud ahaan wuxu noqday mid aan lahayn awood ka talisa ka dib markii dawladii Maxamed Siyaad Barre la tuuray sannaddii 1991-dii. Dumintii dawladdu waxay dhaxalsiisay in sharcigii iyo kala dambayntii meesha ka baxaan. Saxaafadda Soomaaliya oo markii hore keliya ku koobnayd sida hadba dawladdii millateriga ahayd damacdo, ayaa iyana waxay noqotay mid loogu adeegto dano gaar ahaaneed. Saxaafadda caalamiga ah sida BBC Somali oo ka madax bannaanayd xukunkii keli taliska ahaa, ayaa iyana waxa majaraha u qabtay dad lug kulahaa tartankii u dhexeeyey qabaa’ilka, sidaasna saxaafaddu waxay ku noqotay mid keliya uun xoogga saarta meelaha hadba qofka madaxda ka ahi danaynayo. Sida wax kasti badiba u galeen gacanta jabhadaha, ayaa saxaafadduna u badatay mid u qaybsan dhawr garab. Gobollada dalka intiisa kale sida gobollada Sanaag iyo Sool iyo kuwa kaleba oodda ayaa afka laga saaray. Dadka ku dhaqan labadan gobol ayaan iyagu marnaba samaysan cid ugu adeegta dano gaara, iyagoo si hagar la’aana uga qayb qaadanayey shirarkii faraha badnaa ee lagu baadi goobayey in dib dalka la isugu keeno, si markaa heshiis buuxana loo gaadho.
Muddadaa (1991-dii) dadka Soomaaliyeed waxay u qaybsanaayeeen saddex qaybood oo kala ahaa dadkii taliskaa taageerada u hayey; kuwa ka soo horjeeday oo jabhado u dhisnaa daacad u ahaa; iyo aqlabiyadda dadka oo iyagu dhexdhexaad ahaa, kana dhur sugayey isbeddel siyaasadeed oo dalka ka dhaca. Haddaba waxa nasiib darro noqotay in markii maammulkii millateriga ahaa dhacay, dalku gacanta u galo jabhadihii USC, SSDF, SNM, iyo kuwa kale. Taasi waxay keentay in dagaal la isugu fayto oo dagaalkii xukun doonka ahaa isu beddelo mid qabiil. USC oo ay hoggaaminayeen Gen. Caydi iyo Cali Mahdi waxay ku habsatay gobollada koonfureed badiba, iyadoo weliba wixii aan ku abtirsan USC cagta la mariyey. SNM waxay ku dhawaaqday (Somaliland) in gobollada waqooyi goonni u go’een ayay iclaamisay, si afduub iyo been ku salaysan. Sannaddii 1998-dii ayaa iyana hoggaamiyihii SSDF Cabdullahi Yuusuf ku dhawaaqay maammul hoosaad Puntland yeelato. Waxa la kala boobay kaabayaashii dhaqaalaha oo qabaa’ilba intii meeshiisa ka dhisnayd dhan u leexsaday, siiba dekedaha, garoommada diyaaradaha, dhismayaashii dawladda, waddooyinkii qaranka, rugihii ciidammada, iwm. Saxaafadda soomaaliyeed oo ay ku jirto tan caalamiga ah (BBC iyo VOA) waxay qayb ka qaadatay sidii dagaallada loo sii hurin lahaa, dadkana qola-qolo la isaga horkeeni lahaa. Waan ka dheregsannahay baan filayaa doorka BBC laanta af-soomaaligu ka qaadatay dhibaataynta iyo qalalaase u horseedidda dalka iyo dadka soomaaliyeed. Saaxaafadda waddaniga ah sida idaacadaha, bogagga Internet-ka iyo jariiradaha tira dhaafay ayaa iyana qaybtooda ka qaatay dumintii dalka hooyo. Tusaale, BBCSomali, VOASomali, Shabelle, Hornafrik, Dayniile, Dhagaxtuur, Hobyo, Capital Voice, Hiiraan, iyo kuwa kaloo badani waxay si indhala’aan ah u buunbuuniyaan xaaladda dhabta ah ee koonfurta fog ee soomaaliya. Somaliland waxay leedahay warbaahin laxaad leh oo u adeegta ujeeddada kala goynta dalka oo fikirka Somaliland ku salaysan yahay. Puntland iyana kama yaraysato Somaliland, haba u badnaatee saxaafaddeedu mid Gaalkacayo, Garowe, iyo Boosaaso uun ku indha beeshay.
Gobollada Sanaag iyo Sool waxa lagula dhaqmaa hab farsamaysan kaasoo ah in wixii ka dhaca aan laga warbixin, siiba hadday yihiin dhibaato dagaal iyo iskhilaaf siyaasadeed. Tusaale, adduun weynaha waxa laga dhaadhiciyaa in Somaliland tahay (relatively) meel nabad ah, koonfurtuna tahay mid la isku cuno. Arrintan ayaa been ku salaysan. Iyadoo aynu la soconno in Somaliland ay ka dheceen dagaallo badan: kii Adhi Caddeeye Somaliland kula wareegtay; kii Laascaanood lagu qabsaday; kii Dhahar lagu jebiyey Somaliland laba jeer; duullaankii Somaliland Badhan ku qaadday sannaddii la soo dhaafay, oo ay ku guul darraysatay; qalalaasaha ka dhacay Hargeysa oo booliisku shacab ku laayeen; iyo tan u dambaysay ee Laasqoray Riyaale lagaga itaal roonaaday ka dib markii shacabka degaanku iska caabbiyeen gardarrada. Iyadoo arrimahaasi jiraan, ayaa haddana adduun weynuhu weli ku tiraabaa in Somaliland (relatively) tahay meel nabada marka koonfurta loo eego. Su’aashu waxa weeyaan, sidee bay tani ku dhacday? Run ahaantii, waxay ku dhacday saxaafadda been sheegga ah oo adduun weynaha ka dhaadhaacisa waxaan sal iyo raad lahayn. Dhacdadii Laasqoray ee tobankii October, 2008 ayaa tusaale kuugu filan. Saxaafaddu waa ka gaabsatay—tan caalamiga, tan Puntland, tan Muqdisho, iyo tan Somaliland—kolkii ciidammada Puntland iyo Somaliland soo galeen degaanka Laasqoray, iyagoo ku marmarsiinooday inay ku daba jiraan dadka afduubka loogu haysto buuraha calmadow.
Waxa layaab ahayd, in muddo dhawr casha ah idaacadaha, bogagga Internet-ka iyo talafishannada midna laga sheegin iska hor imaadka, marka laga reebo saxaafadda gobolka qaar ka mida oo soo weriyey colaadda kolkaa aloosnayd. Xaqiiqdu waxay tahay, odayaasha degaanka Sanaag oo u feytey inay si iyaga u gaar ah u xalliyaan arrinta afduubka dadka ajnebiga ah, isla markaana ka codsaday labada ciidan ee gardarrada dalka ku soo galay inay dib uga laabtaan dalka. Ciidammada Puntland (waxa laga wadaa Col. Canshuur kuwuu hoggaamiyo) waa yeeleen taladii odayaasha, laakiin kuwa Somaliland ayaa codsaday in la siiyo wakhti si ay baasiin ugu helaan gaadiidkii ay wateen, oo ay sheegeen in shidaalkii ka go’ay. Khayaamo ayay taasi ahayd, hase ahaatee markii ay bixi waayeen, waxa dhacday in dadka degaanku is abaabulaan dibad iyo gudaba. Ciidammo ayaa ka soo baxay Boosaaso (ku kooban dadka Sanaag u dhashay), Xingalool, Dhahar, iyo Badhan. Dhanka kale waxa odayaashu wadeen dedaal ah in nabad wax lagu xalliyo oo ciidammadan soo duulay iskood u baxaan. Culayskii odayaasha debadda iyo gudaha waxa lagu guulaystay in marka horeba dhallinta gobolka u dhalatey—kuwa la socday Somaliland—laga soo reebo, ka dibna xoog loo isticmaalo ciidammada Somaliland. Ciidammada Somaliland waxay arrintani ku dhalisay cabsi, waana iska baxeen Laasqoray. Guushii laga gaadhay xakamaynta dagaal la isku hoobto, ayaa waxay dhashay in xukuumadda Cadde Muuse oo markii loo tegey diidday inay ciidammo kale soo dirto, inay sheegato in ay iyagu ciidammada Somaliland meesha ka eryeen. Taasi mid cusub ma aha oo dagaalkii Dhahar ciidammada gobolku ku jebiyeen kuwa Somaliland, xukuumadda Cadde sidaasoo kale ayay libin beena u sheegatay. Waxa la yaab ahayd markii ciidammadaas laga eryey degaanka Laasqoray, mar qudha ayaa saxaafaddu isla siraadatay. Ugu horrayntiiba, waxa daah furay xogta dhabta ah weriyaha BBC-da Axmed Kismayo oo sheegay in ka bixitaanka Somaliland Laasqoray ka baxday, ay sababtay khilaaf soo kala dhex galay dhallintii reer Sanaag ee ciidammada Somaliland soo raacay, iyo saraakiishii ciidammada soo duulay gadh wadeenka ka ahaa. Saxaafadda Cadde u ololaysa oo ku naallootay in ciidammo Puntland ka yimi ka saareen Laasqoray kuwa Somaliland, ayaa iyana huradadii ka soo kacday. Haddaba, waa markhaanti ma doonto in odayaasha gobolku debed iyo gudaba ay arrintan guul weyn ka dhaliyeen, xukuumadda Cadde Muuse shaqa kuma layhayn haba yaraatee, maammulkeeduna ma daneeyo gobolka Sanaag, haba yaraatee.
Arrintan oo kale waxay ka jirtaa gobolka Sool oo haba yaraatee saxaafaddu ka gaabsatay. Saxaafaddu kama hadasho gardaarrada qaawan ee Sool lagu qabsaday. Hadday ka hadashana waxay sheegtaa uun in dhaqdhaqaaq ciidan ka jiro xadka labada ciidan ee Somaliladn iyo Punland isku hor fadhiyaan. Waxad mooddaa hadba meesha ciidammada Somaliland fadhiistaan in Puntland u nisbayso xad ay aqoonsan tahay. Tusaale, kii Adhi Caddeeye, kii Laascaanood, imminkana xadka ay xukuumadda cadda u aqoonsan tahay Somaliland waa Tukaraq. Halkan ka akhri warkii ugu dambeeyey ee xadkaa—anigu garan maayee—laga soo sheegayo Tukaraq: Xiisado Colaadeed oo ka taagan Jiidaha ay isku horfadhiyaan Somaliland & Puntland ,ka dib markii Somaliland... waa maxay xadkan guurayaa? Ma waxbaa la isla ogyahay, sida dadka qaar hadal hayaan? Ma laga yaabaa in saxaafaddu u soo jeensato arrimaha Sool, haddii dadka degaanku iska kiciyaan ciidammada dalkooda ku soo duuley? Adigaan kuu daayey.
Gebagebadii, gobollada Sanaag iyo Sool saxaafaddu waxay ka dhigtay meel lagu loollamo, oo lagu manna sheegto. Waxa lagama maarmaan ah in la helo saxaafad u xaq qaybisa ummadda soomaaliyeed, oo adduun weynaha runta u sheegta, haba ka abuurantee gobolladan lagu goolaaftamayo. Adduun weynuhu wuxu wax ka dhegaystaa hadba qoladii shukaanta haysa—waagii hore xukuumaddii Siyaad Barre ayay dhegaysan jireen, haddana waxay dhegaha u raariciyaan maammulada jabhadaha ka soo jeeda oo ujeeddadoodu tahay in dalka soomaaliyeed khayraadkiisa dhan loo leexsado, muwaaddinka xalaasha ahna cunaha lagu dhego.
W.Q. Maxamud Axmed Cabdalla (Freelance Journalist)